उपकुलपतिलार्इ तर्साएर जनता तर्साउने उद्देश्य प्रम अाेलीकाे हाे भने गलत: गिरी - हिमाल दैनिक
उपकुलपतिलार्इ तर्साएर जनता तर्साउने उद्देश्य प्रम अाेलीकाे हाे भने गलत: गिरी
म अत्यन्त सानो लगभग नगन्य भन्ने प्रसंगमा कुरा गर्न उठेको छु। केहि दिनअघि समाचारमा आयो, संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई (त्रिभुन सरी त्रिभुवन नै नाउँ छ कि बदलेको छ अहिले? त्यहि नाउँ रहेछ, धेरै नाउँहरु हामीले बदलेका छौँ) त्रिभुवन विमानस्थलबाट फिर्ता गरियो।
आफूलाई फर्काएर ल्याइएको अपमानबोधमा उनले मानवअधिकार आयोगमा एउटा निवेदन दिएका छन्। त्यस निवेदनमा उनले अरु केहि लेखेका छैनन्। मेरो अपमान भयो भनेरमात्रै लेखेका छन्। न कुनै मुद्दा छ, न कुनै आरोप छ, कि मलाई प्रधानमन्त्रीले खोज्नु भयो भनेको छ, एउटा डिएसपीले लिएर आएको छ। उनी प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्षारत छन्। एकदम साधारण कुरा हो, समाचारकालागि लायक पनि छैन। आयोगले पनि यसमा धेरै गर्ला भन्ने छैन। तर, साधारण कुराका पछाडि गमेर हेर्नुभयो भने, यो साधारण कुराभित्र लोकतन्त्रको परिभाषा अन्तरनिहित छ।
लोकतन्त्र एउटा त्यस्तो व्यवस्था हो, जुन व्यवस्थामा जनतासँग सरकार डराउँछ। तानाशाही यस्तो व्यवस्था हो जहाँ सरकारसँग जनता डराउँछ। म दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, त्यस गिरफ्तारीले त्यस धरपकडले केहि गरेन। कतै हिड्न र उड्न आँटेको साधारण मानिस जो उपकुलपति पनि थिए, उनलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएको भनेर ल्याइयो। अरु केहि गरिएन। एकछिन राखियो अनि छोडियो। यो के हो?
आज भन्दा दुई दिनअघि यहाँ गोविन्द केसीका शिलशिलामा छलफल भइरहेको थियो। म बाहिर निस्कदै थिए, एक जना वर्तमान सरकारका वरिष्ठ मन्त्री हिँजोको नेकपा माओवादी पार्टीकै मित्रले भन्नु भयोे अहो, आज संसदमा कस्तो राम्रो दृश्य देखियो। साच्चै नै दुइतिरको दृष्टीकोण देखियो। म गोविन्द केसीका बारेमा धेरै कुरा भन्न चाहन्न पनि। गोविन्द केसीले उठाएका सारा सवाल जायज हुँदाहुँदै पनि मैले मौका पाउँदा भन्नु पर्ने थप कुरा छ। तर, त्यसदिन संसद विल्कुलै विभाजित देखियो। कुनै सदस्य बोल्न उठ्ने वित्तिकै थाहा हुन्थ्यो कि यसले के बोल्छ भनेर।
यो संसद पार्टीको ह्वीप अनुसार गोविन्द केसीको पक्षमा र गोविन्द केसीको विपक्षमा बाँडिएको देखियो। म दुइटा कुरा भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, एउटा कुरा हामी प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु पार्टीका सदस्यमात्रै होइनौँ। सिंगो जनताको विश्वास लिएर आएका छौँ। हामी त्यो क्षेत्रको मात्र सांसद पनि होइनौँ देशको सांसद हौँ। विचार गर्नु पर्ने कुरा के छ भने, कुलप्रसाद कोइरालको त्यो समस्या, एउटा नागरिकको अपमानको समस्या अकारण उपकुलपतिलाई वेइजत गरेको समस्या मैले माथि उठाएको प्रश्नको जवाफ हो।
सरकार जनतासँग डराउँछ वा जनता सरकारसँग डराउँछ? कुनै उद्देश्य छैन त्यसको। कुनै जमानामा अध्यष प्रचण्डले पशुपतिलाई स्पर्स गर्दा पुजारी बदल्ने उद्देश्य थियो होला। तर, यो मात्रै जनतालाई तर्साउने कुरामा सिमित छ। जनता तर्सिउन भनेर। तर, जनता तर्सिदैनन्। र अहिले तर्साइहाल्ने बेला पनि सम्माननीय आदरणीय प्रधानमन्त्रैको छैन। लामोे समयसम्म संघर्ष गर्नु भएको जेल बस्नु भएको उहाँसँग मेरो पहिलो भेट भद्रगोल जेलमा २६ सालमा भएको हो। उहाँले विर्सनु भयो होला तर, मैले विर्सेको छैन। उहाँले के विर्सनु हुँदैन भने, उहाँ आज दक्षिण एशियाकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। दुनियाले उहाँलाई हेर्दैछ। कांग्रेस पराजित छ। कांग्रेसले धृष्टता गरे हुन्छ। पराजयमा धृष्टता गर्नु भनि हामीलाई संसदीय परम्पराले सिकाएको छ। इनडिफिट डिफाइन्स भनेर संसदीय व्यवस्थाका मर्मज्ञ चर्चिलले भनेका थिए। तर, विजयमा म्याग्नानिमिटी हुनु पर्छ। गरिमा हुनु पर्छ। छातीमा हात राखेर भन्छु, प्रधानमन्त्री ओलीको निश्वार्थ म जस्तो निश्पक्ष शुभाकांक्षा ओलीमा छैन। यो प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि याद होला। तर, यो प्रधानमन्त्रीले गरिमा देखाउने बेला हो कुलप्रसाद कोइरालाजस्तो साधारण मानिसलाई तागत र तुजुक देखाउने बेला होइन। अब यदि प्रधानमन्त्रीले कुनै कारणवस उहाँको स्वास्थ्य ठिक नभएकोले, कार्यव्यस्थताको कारणले अन्य कारणले उहाँको अन्जानमा यो घटना घट्न गएको छ भने, उहाँले कमसेकम सम्बन्धीत व्यक्तिलाई एक पटक फोन गरेर मलाइृ दुःख छ है। अफसोच छ है, मैले नजानेर काम गर्न पाएँ भन्नु पर्छ। होइन भने, यो सदनले सदनका प्रत्येक सदस्यले यो कुरा बुझ्नु पर्छ ‘बुढि मरी भन्ने पिर होइन, बाघ पल्कियो भन्ने पिर हो।’ अकारण एउटा मानिसलाई एयरपोर्टबाट हिड्न आँटेको मान्छेलाई फर्काएर ल्याएर ए प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुहुन्छ तपाई आफ्नो बाटो जानुहोस भन्न पाइन्न। उनलाई कुनै आरोप लगाइएको छैन। उनले प्रशासनिक काममा बाधा गरेको छैनन्।
गुटबन्दी छ। हिँजो हामीले विश्वविद्यालयलाई चलाउँदा (हिजो भन्दैछु, यद्यपि आज पनि छँदैछ कसरी विश्वविद्यालय बाँडेका थियौँ थाहा छ। हामीले कलेज बाँढेनौँ कि विश्वविद्यालय बाँढेनौँ कि अस्पताल बाँढेनौँ कि? तपाइहरु सब निर्णयकर्ता हुनु हुन्थ्यो मन्त्री हुनु हुन्थ्यो। त्यहा गुटबन्दी पनि होला। त्यहाँ माले पनि होलान, एमाले पनि होलान कोही नेकपा र कांग्रेसका पनि मान्छे होलान। त्यीनको बहकाउमा लागेर यदि लाग्नु भएको हो भने यस किसिमका कदमहरु उचित छैन। म यहाँ भन्दै छु, व्यक्तिगत इज्जत गरिमा र स्वतन्त्रतको कुरा गर्दै छु। एउटा व्यक्तिको अधिकार प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार सरह हुन्छ। कानुनले अन्यथा नभने वापत। एक व्यक्तिको भोटले संसद विजयी हुन्छ।
(बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाको विषयमा प्रदिप गिरीले व्यक्त गरेका विचार)
12/07/2018, 02: 37: 22 मा प्रकाशित
22964 पटक पढीएको